ဗီဒီယိုဌာနမန်နေဂျာ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ဗီဒီယိုကိုဦးစီးဌာန Manager ကို
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ဗီဒီယိုဦးစီးဌာန Manager ကို
ရာထူး: ဗီဒီယိုကိုဦးစီးဌာန Manager ကို
ကုမ္ပဏီ: နိုင်ငံတနိုင်ငံ Entertainment ကတိုက်ရိုက်လွှင့်
Location: ကရမေလ IN US
အဆိုပါဗီဒီယိုဦးစီးဌာန Manager ကိုအခန်းကဏ္ဍ TourDesign ကို Creative "TDC" မှာဗီဒီယိုဌာနကိုကြီးကြပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကိုမန်နေဂျင်းပါဝင်သည်နှင့်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာနှင့် တွဲဖက်. အားလုံးကိုဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုကိုကြီးကြပ်တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်မူ / အတည်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် client များနှင့်အတူပူးပေါင်းနှင့်ဌာနများအတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်။ ဒီအနေအထားဟာကို Creative ဒါရိုက်တာတစ်ဦးသော့ချက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးဖန်တီးမှု output ကိုပူးတွဲတင်ပြထားအတွက်သူ့ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။
တိုက်ရိုက်နဲ့သုံးဌာနများဖြတ်ပြီးကိုးန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်တစ်နေ့လျှင်-to-နေ့ကစီမံခန့်ခွဲမှုကြီးကြပ်: ဗီဒီယို, စျေးကွက်များနှင့်ဖြန့်ဖြူး
ထုတ်လုပ်မှုလမျးညှနျခနှင့် client ကိုတောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူဒီမိုအမိန့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဖန်တီး
ထိုကဲ့သို့သောရိုက်ကူး, အမှတ်တံဆိပ်များ, နှင့်အနုပညာအဖြစ်ထုတ်လုပ်မှုသည်ဒြပ်စင်သုတေသနနှင့်စည်းရုံး
ထုတ်ကုန်သစ်များတီထွင်နေကြပါတယ်အဖြစ်အသစ်အလုပျထုံးလုပျနညျး ဖန်တီး. အကောင်အထည်ဖော်ရန်
ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံ5+ နှစ်ပေါင်း
စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံ2+ နှစ်ပေါင်း
အတွက်တတ်ကျွမ်း လွန်စွာလိုလားသော, အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် Adobe က, မီဒီယာကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ, Premiere နဲ့ Photoshop
အားလုံးသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကို EEO လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီလျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားပါလိမ့်မည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-06-29